'Mirror mainty' dia manangana vanim-potoana telo handefasana amin'ny Netflix 5 jona - iHorror
Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly 'Mirror Black' dia manangana vanim-potoana telo handefasana amin'ny Netflix 5 jona
'Mirror Black' dia manangana vanim-potoana telo handefasana amin'ny Netflix 5 jona
by Timothy Rawles Enga anie 17, 2019
nosoratan'i Timothy Rawles Enga anie 17, 2019
Black Mirror dia hiverina ho an'ny vanim-potoana hafa, ary toy ny andiany faharoa, dia fizarana telo ihany no ho ao.
Ny anthology dia noderaina noho ny fahafahany misolo toerana Twilight Zone amin'ny vanim-potoana elektronika. Famahana lohahevitra toy ny fitaomana media sosialy sy ny teknolojia robot, Black Mirror manana ny famonoana azy amin'ny horonam-bokin'ny fiarahamonina mibontsina.
Tamin'ny faran'ny taon-dasa, dia lasa karazana meta niaraka tamin'ny endrika iray iraisan'izy ireo Bandersnatch izay nahazo hevitra mifangaro momba ny tantara fa nidera, angamba amin'ny fomba mahatsikaiky, noho ny fanavaozana.
Ny fizarana faha-dimy dia tsy miala amin'ny rafitra soniaviny. Isan-karazany hoy i ireo fizarana ireo dia “hiroboka lalindalina kokoa amin'ny fanjakan'ny faharanitan-tsaina, teknolojia marani-tsaina ary zava-misy virtoaly.”
Na dia kely aza ny vanim-potoana dia tsy izany ny casting.
Ilay kintana Episodes Anthony Mackie, Miley Cyrus, Yahya Abdul-Mateen II, Topher Grace, Damson Idris, Andrew Scott, Nicole Beharie, Pom Klementieff, Angourie Rice, Madison Davenport ary Ludi Lin.
Ho an'ireo tsy mahalala Black Mirror mipoitra amin'izay mety hitranga raha manomboka mifehy ny olombelona ny teknolojia na amin'ny fitaomana na fahatsiarovan-tena. Ireo angano fampitandremana ireo dia nozairina an-tsokosoko ho eo anelanelan'ny siansa foronina sy ny mety.
Topazo maso ilay tranofiara etsy ambany:
'John Wick: Toko 3 - Parabellum' Tady sy ranomaso mankany amin'ny haavo vaovao
Bruce Campbell dia nanesoeso ilay horonan-tsary "Maty ratsy" "Ratsy Ratsy"